भोक, प्यास, निद्रा नभनी १६ घण्टासम्म पीपीले बाफिन्छन् स्वास्थ्यकर्मी ! • raradiodarpan.com
भोक, प्यास, निद्रा नभनी १६ घण्टासम्म पीपीले बाफिन्छन् स्वास्थ्यकर्मी !
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका डा. विनोद प्याकुरेलको हात्केला चाउरी परेको र पटपटी फुटेको जस्तो देखिन्छ।
उनले हत्केला प्रयोग हुने कुनै शारीरिक परिश्रम गरेर हातको स्वरुप बिग्रेको होइन, दैनिक १६ घण्टाभन्दा बढी समय पञ्जा (ग्लोब्स) लगाउँदा हात यस्तो भएको हो । लगातार पञ्जा लगाउँदा हात बाफिएको उनी बताउँछन्।
डा. प्याकुरेलको हातमात्रै होइन फेस सिल्डका कारण अनुहार अगाडिको भाग र पीपीईका कारण शरीरका अन्य भागमा समेत यस्तो असर देखिएको छ।
लगातार सात दिनसम्म उनी दैनिक १६ घण्टाभन्दा बढी खटिए । भोक, प्यास, निद्रा नभनी संक्रमितको उपचारमा खटिँदा अहिले उनी आफैं संक्रमित पनि भएका छन् । मंगलबार पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएका उनी काम गर्दा गर्दै आफू कतिखेर संक्रमित भएँ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्दैनन् । होम आइसोलेसनमा बसेका उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ।
अस्पतालले सात/सात दिनको पालो लगाएर चिकित्सकलाई संक्रमितको उपचारमा खटाउने गरेको छ । डा. प्याकुरेल कोभिड आइसोलेसन वार्डमा खटिँदा पाँच जनामात्रै संक्रमित उपचाररत थिए । तर तीन/चार दिनमै संक्रमितले सबै कोभिड वार्ड भरिएपछि भने उपचारमा कठिन बन्दै गएको उनी सम्झन्छन्।
बेडमा छट्पटाइरहेका विरामीको चित्कार र पीडामा मलम लगाउन यताउता दौडँदा दौडँदै समय बितेको पत्तो नभएको डा. प्याकुरेल बताउँछन्।
यस्ता उदाहरण उनीसँग अरु पनि छ । सास फेर्न नसकेर छट्पटाइरहेका एकजना बिरामीलाई आइसोलेसन वार्डबाट सारेर भेन्टिलेटरसम्म प्याकुरेलले नै पुर्‍याए । पछि ती बिरामीको पनि मृ’त्यु भयो । ‘आँखै अगाडि बोल्दै गरेका बिरामी मर्दा निकै पीडा हुँदो रहेछ’ उनी भन्छन् ।
उपचाररत संक्रमितको मृत्यु हुँदा अन्य बिरामीमा पनि त्रास देखिने डा. प्याकुरेल बताउँछन् । ‘संक्रमितको मृत्यु हुँदा अरु बिरामीले ओढ्नेले अनुहार छोपेर बसेको देखेर साह्रै पीडा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सायद बिरामीहरुमा मर्ने पालो मेरो हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास जस्तो देखिन्छ।’